Inja yamanzi: thola konke ukunakekelwa okudingwa izinwele zakho | Izinja Umhlaba
ULurdes Sarmiento | | Curiosities, Izinja ezijwayelekile
Izinja zamanzi zibonakala zombili ngokuba ngosayizi ophakathi nangokuba nejazi elinoboya, eligobile nelinamaqabunga, elibanikeza ukubukeka okufana nalokho kwezimvu. Kuyaphawuleka ukuthi izinja zalolu hlobo Basebenzise njengezinja zezimvu ngenxa yokuzimisela kwabo ukuqeqeshwa, kanye nasezenzweni zokutakula ezenziwa ngamacishamlilo uma kwenzeka izingozi kanye / noma izinhlekelele zemvelo.
1 Izici zejazi
2 Amafindo e-dog dog dreadlocks
3 Ungawasusa kanjani amafindo akhiwe ezinweleni?
5 Yiziphi izinwele zokugunda izinwele ezivame kakhulu?
Umbala wengubo yakhe imvamisa iyahluka phakathi kwemithunzi ekhanyayo (okumhlophe ne-beige) kanti ezinye ziba mnyama (omnyama nonsundu), yize kungenzeka futhi ukuthola ama-specimens anejazi elinemibala ehlukahlukene lapho abazali babo benengubo ehlukile enombala. Ngokunjalo, kujwayelekile ukuthi, kuye ngohlobo, ubukhulu buyahlukahluka yize abesilisa bevame ukugqama ngokuba bakhulu futhi babe ngamasentimitha ambalwa uma kuqhathaniswa nabesifazane. Ngaphezu kwalokho, yizilwane ezinombala oqinile futhi wezemidlalo.
Amafindo e-dog dog dreadlocks
Uma isilwane sakho sinama-dreadlocks athile aboshwe ngoboya bawo, kulula ukuthi ukhumbule ukuthi kunezinkolelo-ze eziningana mayelana nokunakekelwa okufanele ukunikeze inja kanye nezinwele zayo ezinde nezisontekile; phakathi kwazo, kugcizelela ukuthi leyo ekhombisa ukuthi uboya bayo buqhubeka bugcwele amafindo.
Yize kusobala ukuthi ngokungalunakekeli lolu hlobo lwezinwele kahle, kungenzeka ukuthi bagcine bekhula amafindo ajiyile impela futhi akulula ukususa, ngakho okuwukuphela kwekhambi ukusebenzisa umshini ukuze wehlise ngokuphelele. Ngokunjalo, kufanele kuthiwe njengoba lolu hlobo luvame ukusetshenziselwa ukuzingela, kungajwayeleka kakhulu ekuveleni koboya bebhantshi lalo ukuheha utshani noma izimbabazane, ngaleyo ndlela kuvumele ukwakheka kwamafindo angabukeki anzima ukukhipha.
Ungawasusa kanjani amafindo akhiwe ezinweleni?
Okwalezo zimo lapho amafindo acasulayo futhi angabukekiKukhona izixazululo ezithile, yize kukhona abanakekeli abangawenzi ukulengiswa okufanele kwama-dreadlocks ezilwane zabo, ngakho-ke bagcina sebenza isimo sibe sibi kakhulu. Ngakho-ke, uma ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi uyakwazi ukuqaqa futhi ususe ngokuphelele amafindo akhiwe ezinweleni ze- inja yamanzi, ngezansi sethula izindlela ezahlukahlukene zokukufeza:
Hlanganisa izinwele zesilwane sakho, mhlawumbe usebenzisa iminwe yakho.
Bese uqala ukusebenzisa ibhulashi elithambile ukuze ugweme ukumlimaza.
Qiniseka ukuthi uxubha ingubo yenja yakho ngezigaba, ngenkathi uhlukanisa yonke imicu yezinwele.
Kufanele futhi uqiniseke ukuthi uxubha ifindo ngalinye onalo okungenani kathathu.
Endabeni yamafindo amakwe kakhulu, kungcono ukusebenzisa ibhulashi lensimbi.
Kufanele uqiniseke ukuthi isilwane sakho sikhululekile futhi asihluphi lapho ukhipha uboya baso; Uma kungenakwenzeka ukususa ama-dreadlocks aminyene, inketho efanelekile kakhulu ukuwasika usebenzisa isikelo. Kubalulekile ukuthi unakekele ngokukhethekile lapho ukwenze eduze kwendunu nasezindlebeni, lapho imvamisa uboya buba nefindo futhi bungcolise kalula okudala ukungakhululeki enjeni.
Ngakho-ke, lezi zindawo kufanele zihlolwe okungenani njalo ngenyanga ukuqinisekisa ukuthi zihlala zilungile ngokwenhlanzeko. Ngendlela efanayo, kufanele kukhunjulwe ukuthi inja yamanzi kuthuthukisa ukumbozwa okunamafutha, okukuvumela ukuthi uvikele ngokwemvelo izinwele zakho nokuwashwa kaningi, kanye nokusetshenziswa kwamanye ama-shampoo, kungagcina konakalise ukukhanya kwawo kwemvelo.
Akunconyelwa ukuxubha inja yakho yamanzi usebenzisa ikama, ngakho-ke uma kwenzeka uhlukanisa amafindo alo, kungcono ukwenze usebenzisa iminwe yakho; kepha uma kunembile, ungasebenzisa futhi ibhulashi le-racket (eliqukethe ibhulashi le-bristle elihlukile, eliwugqinsi nensimbi), ngokunakekela okukhulu ukugwema ukulilimaza.
Okungcono, kungcono ukugeza inja yakho yamanzi ngamanzi abandayo Ngoba, njengebhulashi, amanzi ashisayo athanda ukuvula ama-curls akho; Ngokunjalo, kufanele kwaziwe ukuthi indlela engcono yokuyomisa ukuvumela uboya bayo bome emoyeni ovulekile, yize ebusika bonke kuvame ukwelulekwa ukusebenzisa isibhakela, kepha kufanele ixoshe umoya obandayo.
Yiziphi izinwele zokugunda izinwele ezivame kakhulu?
Njengoba sesishilo, kubalulekile ukuthi unake ukunakekelwa okufanele kwama-dreadlocks enja yakho yamanzi, uqiniseke ukuthi usebenzisa ama-canine shampoo avumela ukunakekela uboya bawo nokunaka ukunakekela okudingekayo ukuvimbela ukwakheka kwamafindo. Abantu abaningi abazi ngempela ukuthi yiziphi izinwele zokugunda ezingabanika izinja zabo zamanzi, ngoba imvamisa zincike ezintweni ezithile.
Uma kwenzeka ubethula emncintiswaneni, imvamisa kufaneleka kakhulu ukuthi inja ibe nejazi loboya ngokwemvelo ngangokunokwenzeka; Kodwa-ke, lapho isilwane sakho sihlala endlini, ngoba siyisilwane sasekhaya, kuzokwazi ukwenza izinwele ezahlukahlukene ngokuya ngesizini yonyaka. Iningi labahleli bezinja zamanzi bavame ukusika izilwane ezifuywayo ngendlela enqamulelayo ehlobo, kugcinwe izinwele ezinde lapho kufika ubusika, ngoba kuyindlela ekahle kakhulu yenkalankala yokuzivikela emakhazeni. Kodwa-ke, ngokusho kokuphela okuhloswe ukunika inja yamanzi, kunjalo okuzoba lula kakhudlwana kuzoba ukukhetha eyodwa noma enye.
Kumele ukhumbule ukuthi ukunakekelwa kwesilwane sakho akusoze kwaphela, ngoba kuwumkhuba okufanele wenziwe phakathi komnakekeli nenja yabo. Ngokufanayo, akufanele ukhohlwe ukuthi ukudlala kungaphakathi kokunakekelwa okufanele ukunikeze ngoba isilwane sakho akumnandi nje kuphela, kodwa futhi kusinika nethuba lokuthuthukisa imizimba yabo kanye nokukwazi kwabo ukulandisa; Ngaphezu kwalokho, ngokuqeqeshwa okufanelekile, kuphephile kakhulu ukuthi isilwane sakho sifunde ukuhlala sithule futhi sihlale endaweni ethile, size sizuze nokuzijabulisa okungajwayelekile.
Ekugcineni, kufanele kuthiwe inja yamanzi iyisilwane esinekhono lokuzivumelanisa nazo zonke izinhlobo zezulu, ikakhulu ngenxa yokuthi inengubo yoboya evumela ukuthi imelane, noma, izimo ezishisayo noma ezibandayo kakhulu. Ngendlela efanayo, ijwayele ukuzivumelanisa kalula nazo zonke izinhlobo zezakhiwo, noma ngabe amafulethi amancane, amafulethi noma izindlu ezinezivande ezinkulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Ungawasusa kanjani amafindo ezinweleni zenja yamanzi?